အစွန်ဆုံးထိပီးမြောက် | CeleTrend
ကျနော်နာမည်က ကိုကိုကြီး…..အသက် ၄၀ အိမ်ထောင်ကျဘူးတယ်…..အိမ်ထောင်ကွဲသွားတာ….သားသမီး ၃ ယောက်ရှိတယ်….. လက်ရှိလုံခြုံရေးကင်းတစ်ခုရဲ ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကျနော်နေတဲ့မြို့လေးကသိပ်မကြီးတော့….ကင်းစခန်းတခုလုံးမှာလူ ၂၀ လောက်ဘဲရှိတယ်လေ……..တစ်နေ့တော့ ကျနော်တို့ကင်းစခန်းကို နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အိမ်ထောင်သည်မိသားစု တစ်ခုပြောင်းလာတယ်…အဲမှာကျနော်ဘ၀ရဲ့ပထမဝေဒနာစတော့တာပေါ့…… ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုနေအိမ်လိုင်းခန်းချပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာနဲ့…ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကို တစ်ခန်းခွဲပေးလိုက်တယ်…….
နယ်ကင်းစခန်းဆိုတော့လိုင်းခန်းလဲပေါပေါများများမရှိဘူးလေ….. ကျနော်ယူထားတဲ့ ၂ ခန်းတွဲကလဲ…ကင်းစခန်းဘေးကပ်လျှက်….ကျနော်ရုံးကိစ္စလုပ်ဖို့နဲ့အနားယူဖိုယူထားတာပါ.. ကျနော်က မြို့ထဲမှာအိမ်ရှိတယ်……ကင်းစခန်းထဲမှာက နေ့ဘက်လောက်ပဲနေတာများတယ်လေ…….. အသစ်ပြောင်းလာတဲ့မိသားစုကိုတစ်ခြမ်းခွဲပေးပြီး…ကျနော်ကတစ်ခြမ်းနေလိုက်တယ်………….။ ကျမနာမည်ကဖြူစင်ပါ…..အားလုံးကမဖြူလို့ဘဲခေါ်ကြတယ်လေ..ကျမအမျိုးသားက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း မြန်မာပြည်အနံ့ပြောင်းရွေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူပေါ့….ကျမတို့မှာသားသမီး ၂ ယောက်ရှိပီး…သမီးအကြီးက သူအဖိုးအဖွားတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတယ်….သားအငယ် ကတော့ကျမတို့နဲ့အမြဲလိုက်နေတယ်လေ….သူကအခုမ (၅)တန်း ကျမတို့ဒီမြို့လေးကိုပြောင်းလာတော့….
ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)က လိုင်းခန်းမရှိလို့သူယူထားတဲ့အခန်းကိုတစ်ခန်းခွဲပေးတယ် ကျမတိုကမိသားစု ၃ ယောက်ထဲဆိုတော့…အဆင်ပြေတယ်လေ…သူကလဲအိမ်ထောင်မရှိတဲ့သူ….ညဘက်မြို့ထဲကအိမ်မှာ အိပ်တာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လေ….. ကျမအကြောင်းပြောရရင်…ကျမတို့လင်မယားက…သားလေးမွေးပီးကတည်းက နောက်သားသမီးမရအောင်…..လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ကွန်ဒုံးသုံးရင်သုံး….မဟုတ်ရင်အပြင်ကိုထုတ်ပစ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ထားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကျမက..တားဆေးတွေနဲ့မတည်လို့….နောက်ပီး ပစ္စည်းထည့်ရမှာလဲကြောက်လို့….အဲလိုနေလာတာ…. သားလေးတစ်သက်လို့ပြောလို့ရတယ်.. ကျမတို့ဒီကိုပြောင်းလာပီး…ကိုကြီး(ဦးကိုကိုကြီး)ကအစစအရာရာ ကူညီတယ်…ကျမအမျိုးသားကိုလဲနေရာပေးတယ်…… ပြောရရင်တော့…သူကကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရမလိုပေါ့နော်…..လိုင်းခန်းတစ်ခုထဲမှာအတူနေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့သူတွေထက် ကျမတို့ကပိုရင်းနှီးတယ်ပြောရမှာပေါ့……..
ဖြူလေးတို့မိသားစုရောက်လာပီး…..ကျနော်အရင်လိုမပျင်းတော့ဘူးပြောရမှာဘဲ….ဖြူလေးနဲ့နေ့ဘက်တွေမှာအတူနေရတာ သူလုပ်ပေးတဲ့ လဘက်ရည်သောက်လိုက်….အသုပ်လေးတွေစားလိုက်နဲ့…တော်တော်ရင်းနှီးလာတယ်…သူကလဲကိုကြီး…ကိုကြီးနဲ့ သူယောကျာင်္းကလဲကျနော်နေရာပေးထားတော့…ပိုဂရုစိုက်တာလဲပါမှာပေါ့…….ဖြူလေးက သာမာန်ပါဘဲ…မျက်နှာလေးကချောချော ရင်သားကြီးကြီးနဲ့….တင်တော့ပြားတယ်…..ကလေး ၂ ယောက်အမေဆိုပေမယ့်….ပြုပြုပြင်ပြင်နေတော့….ကြည့်လိုကောင်းတယ်.. ၀တ်တာစားတာကလဲ ဆက်ဆီ ကျတယ်….ဘောင်းဘီအပျော့တွေ….ဂါဝန်တွေအမြဲဝတ်တတ်တယ်…သူများတွေလို ထမီတွေဘာတွေ မ၀တ်တော့….အမြင်ပိုဆန်းတယ်ပြောရမှာဘဲ….ရင်းနှီးရာကနေ….စိတ်တွေဖောက်ပြန်လာတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်…… ဘာလိုလဲဆိုတော့….ဖြူလေးဘောင်းဘီနဲ့ထိုင်နေရင်……..သူ့ဂွဆုံကိုကျနော်ကြည့်မိသလို…..ရင်သားကြီးတော့….အစ်ထွက်နေတဲ့ ဖြူလေးရဲရင်သားတွေကိုလဲ အမြဲကြည့်ကြည့်ပီးဖီးတက်လာတယ်…….
ကျနော်ကပြည်နယ်ရုံးကိုခဏခဏသွားရတော့…ပြည်နယ်က ပြန်လာတိုင်းဖြူလေးတို့သားအမိအတွက်…အ၀တ်အစားတွေဝယ်ဝယ်လာတတ်တော့…ကျနော်သွားတိုင်းဖြူလေးက……တခုခုမှာ တတ်တာအကျင့်လို့ဖြစ်နေတယ်လေ……..ကျနော်ဝယ်လာတိုင်းသူနဲ့မတော်တာ…မကိုက်တာကခပ်များများ…..ဆိုတော့သူအတိုင်း အထွာတွေကို ကျနော်ကိုပြောပြောမှာတတ်တယ်……..ကျနော်ဖောက်ပြန်နေတာဖြူလေးကမသိပေမယ်……ကျနော်စိတ်ကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ဖြူလေးကိုသိမ်းပိုက်ချင်စိတ်ပိုလာတာကျနော်သိတယ်…. အပိုင်း(၂)ကျနော်…ကိုကိုကြီး.. ကျနော်ဖြူလေးကိုဘယ်လိုကြံရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းက…တစ်နေ့ကျနော်ပြည်နယ်ကိုမနက်ဖြန်သွားရမယ်ဆိုတာသိတာနဲ့ ဖြူလေးအမျိုးသားကို…တောဘက်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကျနော်ခိုင်းလိုက်တယ်..အိမ်မှာဖြူလေးနဲ့ကျနော်ဘဲကျန်ခဲ့တယ်… နေ့ဘက်ကျနော်က ဖြူလေးတို့နဲ့လိုင်းခန်းတခုထဲအတူနေတာဆိုတော့….သူယောကျာင်္းမရှိလဲသိပ်တော့မထူးဘူးပေါ့……
ခဏနေတော့ကျနော်လဲ……..အပြင်ထွက်ပြီးမြို့ထဲကကျနော်အိမ်ကိုပြန်….ကိုကာကိုလာတစ်ဘူးယူပြီး….ဆေးထိုးအပ်နဲ့အထဲကို….. လိင်စိတ်ကြွဆေးထည့်လိုက်တယ်….ပီးတော့ပေါက်ကိုဖယောင်းနဲ့ပိတ်ပြီး….လိုင်းခန်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်………… ကျနော်လိုင်းခန်းရောက်တော့ဖြူလေးကရေမိုးခြိုးပီးအလှတွေပြင်လို့…..သူ့ထုံးစံအတိုင်း…အောက်ကစပန့်ဘောင်းဘီရှည်ပျော့လေးနဲ့ လှနေတယ်…ကျနော်လဲယူလာတဲ့အအေးဘူးကိုလှမ်းပေးပီး….. “ဖြူလေးရေ…..ဒီမှာအအေးဖြူဖို့ယူလာတာသောက်လိုက်အုန်း” “အော်ကိုကြီးကလဲ…..ဟုတ်ဟုတ်” ဖြူလေးအအေးဘူးကို…သောက်ရင်း….တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေတယ်…ကျနော်လဲဆေးတန်ခိုးပြမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရင်း…..ရုံးကိစ္စတွေလုပ် နေတာပေါ့……
ခဏနေတော့ဖြူလေးချွေးဆေးလေးတွေထွက်ပြီး…..ပေါင်တွေလိမ်လိုက်ကားလိုက်လုပ်နေတာမြင်ရတော့…ကျနော်စဖိုအချိန်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်……… “ဖြူလေး….ကိုကြီးမနက်ဖြန်ပြည်နယ်ရုံးသွားမှာ…ဖြူလေးဖို့ဘောင်းဘီဝယ်ခဲ့မယ်ဟုတ်ပလား” “နေပါစေကိုကြီး…အားနာစရာ” “ဘာအားနာရမှာလဲဖြူလေးကလဲ…..ဖြူလေးအရှည်ဘယ်လောက်ဆိုတာပြောလိုက်အုန်း” “ဟိုတခါလိုမကိုက်ဘဲနေအုန်းမယ်” “ကိုကြီးဘာသာတိုင်းသွားတော့……”လို့ပြောတာနဲ့ကျနော်လဲ…အလုပ်လုပ်နေရာကနေထပြီး…..ဖြူလေးထိုင်နေတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တယ်… “ထဖြူလေးဟုတ်တယ်တိုင်းသွားမဖြစ်မှာ….တော်ကြာဟိုတခါလို…မကိုက်ဘဲနေလိမ့်မယ်”လိုပြောပီး….ဖြူလေးကိုပခုန်းလေးနှစ်ဖက်ကိုင်ပြီး ထူလိုက်တယ်….ဖြူလေးအလိုက်သင့်မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့မှ…ကျနော်လဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ပီး…… “မှန်းဘယ်လိုတိုင်းသွားရမလဲ….နေအုန်းအောက်ကနေကိုကြီးတောင်ကြည့်မယ်နော်ဖြူလေး” “ရှင်….” “အော် တစ်ထောင်နဲ့ဘယ်နှစ်တောင်ဆိုတာကိုပြောတာ” “အော်ဟုတ်ကိုကြီး”ဆိုပြီး ဖြူလေးက မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့ကြည့်နေတုန်း…..ကျနော်လဲထိုင်လိုက်ပြီး ဖြူလေးခြေတောက်ကနေ အထက်ကို တစ်တောင်၊ နှစ်တောင်ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသူပေါင်လေးတွေကို..ကိုင်ရင်းလုပ်နေတော့….ဖြူလေးတုန်ကနဲဖြစ်ပီး….ညိမ်နေတာနဲ့ “ဖြူလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်…”လို့ပြောလိုက်တော့….သူလဲဆေးအရှိန်နဲ့ပေါင်းနေတော့…..ဘာမပြောဘဲလှည့်ပေးတယ်….ကျနော်လဲအစ ကနေပြန်ပြီး….တစ်တောင်၊နှစ်တောင်ဆိုပြီးတိုင်းရင်း…ဖြူလေးဖင်သားလေးတွေကို…ရဲရဲတင်းတင်းကိုင်လိုက်တယ်……… “အ…ကိုကြီး….ဟို”…..ဖြူလေးတစ်ခုခုပြောဖိုလှည့်အလာ…ကျနော်လဲမတ်တပ်ရပ်ပီး….လှည့်လာတဲ့သူ့မျက်နှာလေးကိုမေးကနေကိုင်ပီး နှုတ်ခမ်းတွေကိုငုံစုပ်လိုက်တာပေါ့………
ကျမတို့ဒီမြို့လေးကိုရောက်ပီး….ကိုကြီးနဲ့တွေရတာ..ဘုရားမတယ်ပဲပြောရမလိုဘဲ….အစစအရာရာအကူအညီရသလို…… ကျမယောကျာင်္းလဲနေရာရတယ်လေ……ပီးတော့…..ကိုကြီးက ကျမတို့သားအမိကို…ဂရုစိုက်တယ်….သူလဲအိမ်ထောင်ကွဲမိသားစုရှိဖူးတော့ သားလေးကိုလဲ…..သူသားလိုချစ်ရှာတယ်…..သူပြည်နယ်ရုံးကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတိုင်း….ကျမတို့သားအမိအတွက်…တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု… ၀ယ်ဝယ်လာတတ်တယ်…….ဒီနေ့လဲသူပြန်နယ်ရုံးသွားဖို့အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့…..တောဘက်ကိုကျမယောကျာင်္းတစ်ယောက်ထဲလွတ်လိုက် ရတယ်….အိမ်မှာသူနဲ့ကျမဘဲကျန်ခဲ့တာပေါ့……ခဏနေတော့ကိုကြီးအပြင်ထွက်သွားတာနဲ့….ကျမလဲရေမိုးချိုးပီး…..အ၀တ်အစားလဲ…. အိမ်ရှေ့မှာ တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်….ခဏနေတော့…ကိုကြီးပြန်လာပီး…ကျမဖို့ကျမကြိုက်တဲ့အအေးဝယ်လာတာတွေတယ်…….. သူတိုက်တဲ့အအေးသောက်ပီး….ကျမစိတ်တွေဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူး…..တစ်မျိုးကြီးဘဲ…တစ်ကိုယ်လုံးလဲဖိန်းခနဲရှိန်းခနဲ့နဲ့……။။ အဲလိုဖြစ်နေတုန်းကိုကြီးက….ကျမဖို့ဘောင်းဘီဝယ်ဖို့အရှည်တိုင်းမယ်ဆိုပီး……..နောက်ကနေထိုင်….သူလက်ကြီးနဲ့တစ်တောင်နှစ်တောင် တိုင်းရင်း…ကျမတင်သားတွေကိုဖြစ်လိုက်တဲ့အခါ….ကျမဟိုးအမြင့်ကြီးကိုရောက်သွားသလိုဖြစ်ပီး…..သူ့ကိုတားဖိုအလှည့်….သူကထရပ်ပီး ကျမမေးကနေကိုင်ပီး…နှုတ်ခမ်းတွေငုံစုပ်လိုက်တော့…လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြန်သွားသလိုကျမခံစားလိုက်ရတာပါဘဲရှင်……။
ဖြူလေးနှုတ်ခမ်းတွေကိုငုံစုပ်ရင်း……ကျနော်ဒူးကွေးလိုက်တယ်….ပီးတော့ဖြူလေးနဲ့စပန်ဘောင်းဘီးအပျော့လေးဝတ်ထားတဲ့ ဖင်ကြားလေးထဲကို….နောက်ကနေကျနော့လီးကြီးထောက်ပေးထားလိုက်ရင်း…ဖြူလေးနို့တွေကို….ဖြစ်ညစ်ရင်းအနမ်းရှည်းကြီးပေး နေတာပေါ့….ဖြူလေးဘာမပြန်မပြောနိုင်ဘဲ…ခေါင်းလေးနောက်လည်ပြန်ရင်း….ဖင်လေးကိုနောက်ကောက်ပေးလာတာတွေလိုက်ရတယ်… ကျနော်စိတ်တွေအရမ်းဟော့လာတော့….ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပီး…လီးကြီးကိုထုတ်ကိုင်….ဖြူလေးဖင်သားလေးနှစ်ခြမ်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ဖြဲပီး… လီးကြီးကိုထောက်ထားလိုက်တယ်…… “အ….အင်းးးးး…..” ဖြူလေးမပိမသအသံများသာထွက်ရင်း……ဖင်လေးကိုကော့ကော့ပေးနေတာပေါ့…..စပန့်သားဘောင်းဘီအပျော့လေးဆိုတော့…ဖင်သား တွေရဲ့နူးညံ့မှုကိုအပြည့်အ၀ခံစားနေရသလို….ဖြူလေးလဲကျနော်လီးအနွေးဓါတ်ကိုသိနေပီလေ…..ကျနော်ဖြူလေးဖင်သားတွေကိုကိုင်ဖြဲ ထားရာကနေလက်တွေကိုရှေ့ဖက်ပို့ပြီး..ဖြူလေးစောက်ပတ်ကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်ပေးလိုက်တော့….ဖြူလေးဒူးတွေညွတ်မလို ဖြစ်သွားတယ်…..
ကျနော်ထိန်းကိုင်ရင်းဖြူလေးကို….သူတို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းထဲ….နမ်းရင်း…ပွတ်ရင်း…တွန်းရင်းခေါ်သွားလိုက်တယ်. အခန်းထဲကုတင်နားရောက်တော့ဖြူလေးကိုအသာ….တွန်းပြီးကုတင်ပေါ်မှောက်လိုက်တယ်…..ဖြူလေးကုတင်ပေါ်အပေါ်ပိုင်းမှောက်ရင်း….. မှိန်းနေတုန်း…..ကျနော်နောက်ကနေထိုင်ပြီးဘောင်းဘီလေးကိုစွဲချွတ်လိုက်တယ်…..။ “ကိုကြီး…ကိုကြီး…ဖြူလေ….” “ဖြူလေး…ချာတိတ်..ကိုကြီးကိုခွင့်လွတ်ကွာ…ကိုကြီးဖြူလေးကိုချစ်နေတာကြာပီ့….”လိုပြောရင်း……..ဖြူလေးဖင်ကြားလေးထဲကနေနောက်ကို ပြူထွက်နေတဲ့….စောက်ဖုတ်လေးကို…လှမ်းယက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ဖြူလေး အားလိုအော်ရင်စကားလုံးတွေပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပေါ့….။ ကျနော်ဖြူလေးရဲဖင်ကိုဖြဲရင်း…..ကြားထဲကပြူထွက်နေတဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုစိတ်ကြိုက်ယက်လိုက်……အပေါက်လေးထဲကိုလျှာချွန်ပြီးကလိလိုက်လုပ် နေရာကနေအသာရပ်ပီး….ကျနော်လီးကြီးကိုဖြူလေးစောက်ပတ်ဝလေးတေ့ကာ…အသာဒစ်ကလေးစသွင်းလိုက်တယ်…..။
“အား…ရှီး……ကိုကြီး…အ…အ..” “ဖြူလေးရယ်…ချာတိတ်ရာ…..”ကျနော်သူနာမည်ကိုတတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း…..နောက်ကနေဖြူလေးဖင်သားလေးတွေပွတ်သပ်ချော့မြှူရင်း…… အသွင်းအထုတ်လုပ်ကာလီးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်…… “အား….ကြပ်တယ်…..အား…” ကျမ …..ကိုကြီးရဲအပြုအစုအယုအယတွေအောက်မှာနစ်မြောရင်း….အိမ်ခန်းထဲကကျမတို့လင်မယားအိပ်တဲ့ကုတင်ပေါ်ကို……မှောက်ရက်ကလေး ရောက်သွားတော့တယ်……အပေါ်ပိုင်းက…ကုတင်ပေါ်မှောက်နေပီး….အောက်ပိုင်းကတော့…ကုတင်အောက်မှာ….အဲအချိန်မှာဘဲကိုကြီးက…ကျမ….. စပန့်သားဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ရင်း…ကျမကိုချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ..ပြောရင်း…….ကျမဖင်သားလေးတွေကို…ကိုင်ဖြဲကာ…..သူ့လျှာကြီးနဲ့ကျမဟာလေးကို နောက်ကနေလှမ်းယက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာ……..ရင်ထဲဗျောင်းဆန်ခတ်ကာ……မွေ့ယာခင်းကိုလက်တွေနဲ့စုပ်ကိုင်ရင်းးးး….ဖင်လေးကိုနောက်ကော့ပေး မိတော့တယ်…..အိမ်ထောင်သက်တွေကြာပေမယ့်…ကျမယောကျာင်္းကအဲလိုတွေမလုပ်တတ်သလို……သူဆန္ဒရှိတဲ့အခါ…အပေါ်ကနေတက်လုပ်ရင်း…. ပီးခါနီးရင်အပြင်ထုတ်ပီးလိုက်တာကများတယ်….အခုလိုလျှာနဲ့ယက်ပေးတယ်ဆိုတာ…..ပြောသံတွေ….နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေထဲမှာတွေဖူးမြင်ဖူးပေမယ် တကယ်ခံစားတဲ့အခါ….ဒီလောက်ကောင်းလိမ့််မယ်လို့ထင်မထားမိဘူးလေ……ခဏနေတော့….ကိုကြီးမတ်တပ်ရပ်လိုက်တာသထိထားမီတယ်….. ကျမအရမ်းလိုချင်နေပီဆိုတာ….၀န်ခံရမှာဘဲ…..သူကျမကိုလိုးတော့မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်….ကျမ…တားမြစ်ဖို့ခွန်အားမဲ့နေတာသိတယ်….။ ကိုကြီးသူ့လီးကြီးကို…ကျမဖင်ကြားကနေပြူထွက်နေတဲ့စောက်ပ၀လေးကိုထောက်လိုက်တယ်….ပီးတော့စလိုးပါတော့တယ်….ကိုကြီးလီးဟာကျမယောကျာင်္း လီးထက်…တော်တော်ပိုကြီးတာ…ကျမဖင်ကြားကိုဘောင်းဘီပေါ်ကထောက်ကထဲကသိတယ်….ဒါပေမယ်…စောက်ပတ်ထဲဝင်လာတော့…..ကျမထင်တာထက် ပိုကြီးတာ….သိလာရယ်…အရမ်းကြပ်ပီး…..ပြည့်သိပ်နေတာခံစားရယ်လေ….။
ကျနော်ဖြူလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးရင်းကနေ…..လီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့……ခပ်သွက်သွက်လေးလိုးရင်း…ဖြူလေးဖင်ကိုဖြဲကာ အဆုံးထိတစ်ရစ်ချင်းထည့်လိုက်တယ်…. “အား….ဖြေးဖြေးကိုကြီး…အရမ်းကြပ်တယ်..” “ဖြူလေးပေါင်ကားလိုက်…နော်ချာတိတ်….အားဖြူလေးစောက်ပတ်က…အရမ်းကြပ်တာဘဲကွာ….” ကျနော်ဖြူလေးကိုပေါင်ကားဖိုပြောရင်း….ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဖြူလေးပေါင်တွေကိုဆွဲကားပေးလိုက်တယ်…ဖြူလေးလဲအလိုက်သင့်ကားရင်း..ခြေဖြားလေး ထောက်ပီးဖင်ကိုအပေါ်ကော့ပေးလာတော့…လိုးရတာပိုအဆင်ပြေပီး…အ၀င်ချောလာတယ်…ဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲကလဲ….စောက်ရည်တွေထွက်နေ ပီဆိုတော့…..တအားကြပ်မနေတော့ဘဲ…အ၀င်အထွက်ချောလာတာနဲ့…ကျနော်လဲအဆုံးထိထည့်ပေးလိုက်တယ်….. “အား…အထဲကိုထိတယ်…ကိုကြီး…အားအောင့်တယ်…” ဖြူလေးအတွင်းသားအိပ်ကိုထိပုံရတယ်….ဖြူလေးကအရပ်ပုတော့….သားအိပ်နိမ့်ပုံရတယ်…ကျနော်လဲလီးထိပ်ကိုတစ်ခုခုထိမှန်းသိတယ်ကျင်ကနဲ့နေ သွားတာကို…ဒါနဲ့ဖြေးဖြေးလေးအသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းကနေ…ဖြူလေးအင်္ကျီကိုချွတ်ရင်း….နောက်ကနေဘော်လီချိတ်တွေဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်….. အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့မှောက်ခုံလေးအလိုးခံနေတဲ့ဖြူလေးကို….အသာမပြီးသူနိုတွေကိုနောက်ကနေလှမ်းချေပေးလိုက်တယ်…….
ဗွတ်….ဗွတ်….အ….အင့်အင့်…အား…အ…အ….. ဖြူလေးစီက…ဘာမှန်းမသိရတဲ့အသံတွေထွက်ရင်း…ကျနော့်လိုးချက်တွေကိုခံနေရှာတယ်….။ “ဖြူလေး….အား…ကိုကြီးပီးတော့မယ်နော်…” “အား….အပြင်ထုတ်နော်ကိုကြီး…ဖြူ….ဆေးလဲမစားဘူး…ထိုးလဲမထိုးထားဘူး” “ဖြူစိတ်ချ…ကိုကြီးကသားကြောဖြတ်ထားတာ….စိတ်မပူနဲ့နော်ဖြူလေး” “အား…ဖြူကြောက်တယ်နော်ကိုကြီး…” “စိတ်ချပါ…ဖြူဗိုက်မကြီးစေရဘူး…ကိုကြီးသားကြောဖြတ်ထားတာ”ပြောရင်းအဆက်မပြတ်ကျနော်လိုးနေမိတယ်….ဖြူလေးလဲစိတ်ထနေပီဆိုတော့… ဖင်ကိုနောက်ကော့ရင်း….ပြန်စောင့်စောင့်ပေးနေတယ်… “ဖြူလေး….အား…ကောင်းလိုက်တာကွာ” “ကိုကြီး…နဲနဲစောင့်ပေး…ဖြူထွက်ချင်ပီး…အ..အား…ဟုတ်တယ်…စောင့်ကိုကြီးအား…အ” “ကိုလဲပီးပီ…အား…”ပြောရင်းကျနော်သုတ်ရည်တွေကိုဖြူလေးစောက်ပတ်ထဲ….ပန်းထည့်လိုက်မိတယ်……..။ ကိုကြီး….လိုးလာလိုက်တာ…သူ့လီးကြီးကျမထဲအဆုံးဝင်တဲ့အထိပေါ့…..
သူလီးကရှည်လဲရှည်တော့ကျမသားအိမ်ကိုထောက်မိတယ်…ကျင်ပီး အောင့်သွားတာဘဲ…ကျမပြောလိုက်တော့မ…သူနဲနဲလျော့သွားတယ်…..ကိုကြီးပီးတော့မယ်ဆိုတော့မ…ကျမလန့်သွားတယ်….ကျမကဆေးမတည့် ဘူးလေ…ဆေးလဲမစား…ထိုးလဲမထိုးတော့…ကိုကြီးကိုအပြင်မှာပီးဖို့ပြောလိုက်တယ်…ကိုကြီးကသားကြောဖြတ်ထားတယ်တဲ့…..ကျမလဲနဲနဲတော့ စိတ်အေးသွားတယ်…..နောက်ဆုံးကိုကြီးပီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုကြီးကိုဆွဲလမ်းသွားတယ်ဆိုတာဝန်ခံရမလိုဘဲ…..။ ဘာလို့လဲဆိုတော့…ကိုကြီးလရည်တွေကျမစောက်ပတ်ထဲကို…အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ပန်းထည့်လိုက်တဲ့အရသာဟာ……ဘာနဲ့မလဲနိုင်အောင်ပါဘဲ… ကျမအဲလိုအပန်းမခံရတာ..နှစ်တွေအတော်ကြာခဲ့ပီလေ…….အဲလိုပန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအပြည့်အ၀ပီးသွားတာကို…ပထမဆုံးအကြိမ်ခံစားလိုက်ရတယ်..။ “အားဖြူလေးရယ်…” ကိုကြီးကျမအပေါ်မှောက်ရက်လေးထပ်ကျလာရင်း….သူလီးကြီးတပ်ရက်မှီန်းနေတယ်…..။
“ထတော့ကိုကြီး….တစ်ယောက်မြင်သွားလိမ့်မယ်” အစကတဏှာစိတ်မွန်နေပေမယ်…အခုတော့လန့်ရမှန်းကျမသိသွားတယ်…ကိုကြီးလဲချက်ချင်းထပြီးပုဆိုးပြန်ဝတ်လိုက်တယ်……။ကျမလဲဘောင်းဘီပြန်ဝတ် အကျီင်္ပြန်ဝတ်ပီး…..ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေလိုက်တယ်…ကိုကြီးကတော့အပြင်ထွက်သွားပီး…အိမ်ရှေ့ခန်းကသူအလုပ်စားပွဲမှာထိုင်နေတယ်….။ကိုကြီးနဲ့ကျမအခုလိုဖြစ်ပီး…..မျက်နှာပူတာနဲ့ကျမလဲရှောင်နေလိုက်တယ်……သူပြည်နယ်ရုံးကပြန်လာပီး….ကျမအတွက်ဘောင်းဘီအရှည်အတိုတွေ……. အကျီင်္တွေအစုံဝယ်လာသလို…..သားလေးအတွက်လဲကစားစရာနဲ့…မုန့်တွေဝယ်လာတယ်……ပီးတော့အိမ်ရှေ့မှာထားပီးပြန်ထွက်သွားတယ်…….ကျမအမျိုးသားနဲ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်းစကားပြော….အလုပ်အတူလုပ်နဲ့…..သူမဟုတ်သလိုဘဲ….ကျမလဲနှစ်ရက်လောက်ရှိတော့….ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားပီးမျက်နှာပူတာရှန့်တာမရှိတော့ဘူး……. ဒီနေ့ထုံးစံအတိုင်းကျမနေ့လည်ရေမိုးချိုးအ၀တ်အစားလဲပီးချိန်ကိုကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်…..သူရုံးအလုပ်တွေထိုင်လုပ်နေတာပေါ့…..ကျမယောကျာင်္းကတော့မြို့ထဲကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ထွက်သွားတာပေါ့……ကျမအခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာပေါ့တေးဘဲလ်လေးနဲ့ ကိုရီးယားကားကြည့်နေတုန်း….ဖုန်းမည်လာတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့… ဖုန်းနံပါတ်က ကိုယ်မသိတဲ့ဖုန်း…..ဘယ်ကဖုန်းလဲဆိုပီးကိုင်လိုက်တာပေါ့…
“ဟလို….ပြောပါရှင်” “ချာတိတ်…ကိုကြီးပါ…..” ကျမရင်ထဲထိတ်ကနဲ့ဖြစ်သွားသလို…….လက်တွေလဲတုန်နေတာပေါ့…..ကိုကြီးဖုန်းဆက်လာလိမ့်မယ်လိုလဲမထင်ဘူးလေ………………။ “ဟုတ်….ပြောပါ…” “စိတ်ဆိုးတုန်းလားဟင်..ချာတိတ်” “မဆိုးပါဘူး….”ကျမဒီစကားလုံးဘယ်လိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာ….ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ဘဲ….အလိုလိုထွက်သွားတယ်…..။ “၀မ်းသာလိုက်တာချာတိတ်ရာ….အပြင်ထွက်ခဲ့ပါ့လားဟင်…” “အာကိုကြီးကလဲ….ဘာလုပ်ဖိုလဲ” “မျက်နှာလေးမြင်ချင်လိုပါကွာနော်…ထွက်ခဲ့နော်ချာတိတ်”ဆိုပီးဖုန်းချသွားတယ်…..ကျမလဲထွက်ရမလား…..မထွက်ရမလားဝေခွဲမရဖြစ်နေသလို…..ရင်တွေလဲခုန်နေတယ်။ ထွက်လိုက်ရင်….ငါ့ကိုသူတစ်ခုခုလုပ်မှာလား….အို…ကျမစိတ်တွေဟိုပြေးဒီလွှားနဲ့…….အကြောင်းမဲ့လက်တွေချိုးရင်းစဉ်းစားနေတာပေါ့…။ အဲချိန်မှာဘဲ……ကျမအခန်းရဲ့ခန်းစည်းလိုက်ကာလေးလှုပ်သွားတာမြင်လိုက်ရသလို…..အပေါက်ဝမှာကိုကြီးမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတယ်….ကျမလဲရင်တွေတုန်လွန်းလို……. ကုတင်ပေါ်ကနေချက်ချင်းထထိုင်လိုက်မိတယ်…
“ကိုကြီး….အခန်းထဲမ၀င်နဲ့….တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားရင်အကုန်ခက်ကုန်မယ်နော်…” “ဒါဆိုချာတိတ်ထွက်လာခဲ့လေ”တဲ့….ကျမလဲမထွက်ရင်သူဝင်လာမယ်ဆိုတာသိနေတော….ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပီး…..အိမ်ရှေ့သူအလုပ်လုပ်နေတဲ့စားပွဲနားကိုသွားထိုင်လိုက် ရင်းကနေ…. “ပြော….ဘာပြောမလို့လဲ”လို့မေးလိုက်ရင်ဘဲကိုကြီးက….ကျမကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပီး……မျက်နှာလေးကိုမေးကကိုင်မော့ကာနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းလိုက်တယ်……ကျမတိမ်တွေ ပေါ်ရောက်သွားသလို….အမြင်ကြီးကပြုတ်ကျသလို….အိုးးးးးး……ခံစားမှုအနိမ့်အမြင့်အစုံနဲ့နစ်မျောနေတာပေါ့….ကိုကြီးလက်တွေကလဲ….ကျမရဲနို့တွေကိုအကျီင်္ပေါ်ကနေ ပွတ်သပ်ချေမွနေတယ်…..ပီးတော့လက်တွေကအောက်ကိုဆင်းသွားပီး….ကျမဂါဝန်ပေါ်ကနေ….ဖင်သားတွေကိုဖြစ်လိုက်…ပေါင်တွေကိုပွတ်လိုက်နဲ့…….ကျမကိုပြုစားနေ တာပေါ့…..။ “အား…ကိုကြီး…တော်ပါတော့…တော်ကြာကိုမျိုးပြန်လာလိမ့်မယ်” “မလာသေးပါဘူးချာတိတ်ရာ….သူကလေးကျောင်းတစ်ခါထဲကြိုခဲ့မယ်တဲ့…ကိုကြီးကိုပြောသွားတယ်” “အားးးး…မလာလဲတော်ပါတော့နော်” “ချစ်လိုပါချာတိတ်ရယ်…ကိုကြီးကိုခွင့်ပြုပါနော်….ခဏလေးပါ”………ကိုကြီးကပြောလဲပြော….လက်ကလဲကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဂါဝန်ပေါ်ကနေပွတ်ပေးနေတာပေါ့…….။ ကျမလဲသူလုပ်သမျှရင်ခုန်လှိုက်မောစွာနဲ့….ခံယူနေမိတယ်….ခဏနေတော့ဂါဝန်လေးကိုလှန်လိုက်ပီး…..အောက်ကစတော်ကင်လေးပေါ်ကနေကျမအဖုတ်လေးကိုပွတ်တယ် “ချာတိတ်ရယ်….ချစ်တယ်ကွာ…”သူကဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရင်း…..ကျမဖင်သားတွေကိုနယ်လိုက်….အဖုတ်လေးကိုပွတ်လိုက်နဲ့ကျမမှာသူအယုအယတွေကို…….။
မိန်းမူးနေအောင်ညှို့ယူဖမ်းစားနေတာပေါ့….ခဏနေတော့ကျမကိုဆွဲထူလိုက်တယ်…ကျမနဲ့ကိုကြီးမတ်တပ်လေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေချိန်မှာကိုကြီးက…ကျမမျက်လုံးတွေ ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း…. “ခလေးဟိုဖက်လှည့်လိုက်နော်”တဲ့ကျမကိုစိတ်ညှို့ပီးပြောလိုက်သလိုဘဲ….ကျမလဲကိုကြီးပြောသလို….သူ့ကိုကျောခိုင်းလှည့်လိုက်တယ်…….အဲအချိန်မှာကိုကြီးကကျမဆံပင် တွေကိုအသာဖယ်ပီး….နောက်ကနေကျမဂုတ်သားလေးတွေကိုနမ်းစုပ်နေတယ်….ကျမရင်တွေအရမ်းခုန်နေသလို….ဒူးတွေလဲညွတ်ချင်ချင်ဖြစ်နေပီလေ……..။ “ချာတိတ်လေး…..ဖင်လေးနောက်ကော့လိုက်ပါ့လားကွာနော်ခလေး”…..ကိုကြီးဟာကျမကိုစိတ်ညှို့ထားသူတစ်ယောက်ကိုအမိန့်ပေးသလို…..ခိုင်းစေနေတာ……ကျမလဲ.. သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း….ဖင်လေးကိုနောက်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်……..ကိုကြီးက….ကျမကော့ပေးလားတဲ့ဖင်လေးကိုဖွဖွလေးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွတ်ရင်းဖင်သားလေးနှစ်ချမ်းကို ဖြဲလိုက်….ပွတ်လိုက်လုပ်နေတာ…ကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲကအရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာတဲ့အထိပေါ့….ကျမဖင်လေးကိုကော့ပေးရင်း….သမင်လည်ပြန်လေးကြည့် လိုက်ချိန်မှာ….ကိုကြီးက…ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုစီးပြီးစုပ်နမ်းလိုက်တယ်….ပီးတော့…..သူဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ပီး….သူလီးကြီးကိုထုတ်လိုက်တာကျမလှမ်းမြင်လိုက်တယ်…. ကျမစိတ်တွေတအားလှုပ်ရှားနေပီး…..သူရှေ့ဆက်မှာကိုလဲမတားဆီးမိတော့ဘူး…….။ “ချာတိတ်လေး…” “ရှင်…ကိုကြီး….”ကျမအသံဟာတာဝေးအပြေးသမားတစ်ယောက်ပန်းဝင်လာသလို…အမောတကြီးဖြစ်နေတယ်လေ….။
“ချာတိတ်ဖင်ကြားထဲကို…ကိုကြီးလီးထောင်ချင်တယ်ကွာ….နော်”….ကျမနားထဲပူသွားသလို….စိတ်တွေလဲကယောင်ချောက်ချားဖြစ်ကုန်တာပေါ့……. “အင်း….ကိုကြီးသဘောကွာ”….ကျမပြန်ဖြေပေမယ့်ကိုကြီးကလုံးဝကျမဖင်ကြားထဲကို…သူလီးကြီးမထည့်သေးပါဘူး…… “ချာတိတ်ဖင်လေးကိုထပ်ကော့ပေးပါ့လား….ကိုကြီးလီးနဲ့ထောက်လိုကောင်းအောင်လို့နော်ချာတိတ်”…ကိုကြီးကထပ်ခိုင်းစေလိုက်သလို….ကျမဂုတ်သားလေးတွေကိုလဲ…. သွားနဲ့မနာအောင်ကိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ…ကျမလဲ….ဟင့်ကနဲ့ညီးညူသံနဲ့အတူ….ဖင်ကိုထပ်ကော့ပေးလိုက်မိတယ်……။ အား….သူလီးကြီးကျမဖင်ကြားကိုထောက်လိုက်တယ်…….ဒါပေမယ့်ဂါဝန်ကော…..စတော်ကင်ပါကြားခံနေတော့….ကိုကြီးလီးအနွေးဓါတ်ကသိပ်မခံစားရဘူး…ဒါပေမယ့်… ရင်ခုန်မှုကတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပါဘဲ…စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ…ဖောင်းကားပီး…အရည်တွေတအားထွက်နေပီပေါ့…….. “ချာတိတ်ရယ်…ကောင်းလိုက်တာကွာ…..ဂါဝန်လေးလှန်လိုက်ပါ့လား….အဲဒါမကိုကြီးလီးကချာတိတ်ဖင်ကြားကိုပိုထိမှာလေ” “ဟုတ်…အား…အင်းကိုကြီးရာ….”ကျမလဲညီးညူရင်းကိုကြီးခိုင်းသလို…ဂါဝန်လေးကိုလှန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ…အောက်ကစတော်ကင်အနီရဲလေးနဲ့နောက်ကိုကော့ နေတဲ့ကျမဖင်လေးကိုမြင်နေရတယ်…ကိုကြီးကကျမဖင်ကြားထဲကိုသူ့လီးကြီးထည့်ရင်းစောင့်လိုက်တယ်….ဒုတ်ကနဲ့ထိသလို….ကျမပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်ရင်း…….. ပေါင်တစ်ဖက်ကိုစွဲမပြီး……ဒူးကွေးကာ…သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမဂွဆုံနေရာ…စောက်ဖုတ်တည့်တည့်ကို…ထောက်လိုက်တာကျမဒူးတွေညွတ်ကျသွားပါတော့တယ်……။ “ချာတိတ်လေး….လိုးရအောင်နော်…”ကျမနားထဲကိုဗုံးအလုံးပေါင်းများစွာပေါက်ခွဲလိုက်သလို…ကိုကြီးစကားလုံးတွေက…၀င်ရောက်လာပါတယ်…..နားကတစ်ဆင့်….. ကျမဦးဏှောက်ကိုလဲခိုင်းစေလိုက်သလိုပါဘဲ…..ကျမခေါင်းအလိုလိုညိမ့်မိပါတော့တယ်…….။
“သွားချာတိတ်လေး….အခန်းထဲကို…ကုတင်ပေါ်ကနေစောင့်နေနော်…”တဲ့ကျမဟုတ်တစ်လုံးထဲကလွဲပီးဘာမ…မပြောနိုင်တော့ပါဘူး….ချက်ခြင်းဘဲအခန်းထဲသွားဖို့ ကျမလုပ်လိုက်ပါတယ်…ဒါပေမယ့်ကိုကြီးက ကျမလက်ကိုဆွဲထားလိုက်တော့….ကျမကြောင်ပီးသူကိုကြည့်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကိုကြီးက…………။ “ဘယ်ကိုလဲချာတိတ်…ဘယ်သွားမလိုလဲ…” ကျမလဲချက်ချင်းဘဲ…“အခန်းထဲကိုလေ…ကိုကြီး”…… “ဘာသွားလုပ်မလိုလဲအခန်းထဲကို….”ကျမ….ကိုကြီးမေးတာကိုအစကနားမလည်ဘူး…. “ကိုကြီးဘဲအခန်းထဲကသွားစောင့်ဆိုကွာ….”စိတ်မရှည်စွာဘဲဖြေလိုက်တယ်……. “အင်းလေ…ချာတိတ်ကလဲ…အခန်းထဲကိုဘာလုပ်ဖိုသွားမှာလဲပြောပါအုန်းကိုကြီးကို…နော်…ချာတိတ်နော်လို့” “ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့….သွားမှာမလား…ဟုတ်တယ်မလားဟင်ချာတိတ်”…..ကျမလဲကိုကြီးစားလုံးတွေ…အယုအယတွေအောက်မှာနစ်မျောနေပါပီ…. ချက်ခြင်းဘဲ….“ဟုတ်…ဟုတ်…ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့အခန်းထဲသွားမလို့ပါ…”ကျမဒီစကားလုံးတွေကို…နှုတ်ကလား….ဦးဏှောက်ကလား….ဘယ်ကထွက်လာတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိတော့သလိုပါဘဲရှင်……။ကျမအခန်းထဲကိုရောက်တာနဲ့…..ဂါဝန်နဲ့စတော်ကင်လေးကိုချွတ်ပီး……..ဘရာတစ်ခုထဲဝတ်ကာကုတင်ပေါ်တက်ပီး….ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့အသင့်စောင့် နေလိုက်ပါတယ်……ခဏကြာတော့….ခန်းစည်းလိုက်ကာလေးလှပ်ပီးကိုကြီးဝင်လာတယ်….ကျမမျက်လုံးဒေါင့်ကနေမြင်နေရတယ်…ကိုကြီးကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာ ပီးကျမအပေါ်ကနေကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းစုပ်ရင်း….လက်ကကျောအောက်ကိုလျှိုထည့်ကာ ဘရာဂျိတ်လေးတွေဖြုတ်လိုက်ပါတယ်….ကျမအလိုက်သင့်ကျောကော့ ပေးရင်းကနေ…ဘရာလေးကိုပင့်တင်ရင်းနို့တွေကိုငုံစုပ်ခံလိုက်ရတာဟာ….ရင်တစ်ခုလုံးလစ်ဟာသွားသလို……စောက်ပတ်ထဲကလဲအရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ယိုစီးကျလာ ပါတော့တယ်…..
“အား….ရှီး….အ….ကိုကြီးအင်းးးးးးးးးးးးးးးး” ကျမ မပီမသစကားလုံးဗလုံးဗထွေးတွေရေရွတ်ရင်း….ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကော့တက်နေသလို….ကိုကြီးကလဲကျမနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုငုံလိုက်…..သှူ့လျှာကြီးနဲ့နို့သီး တွေကို ၀လုံးဝိုင်းသလိုလုပ်လိုက်….နည်းမျိုးစုံသုံးပီး…ကျမကိုပြုစားနေပါတော့တယ်ရှင်….. တဖြေးဖြေးကိုကြီး….အောက်ပိုင်းကိုဆင်းသွားကာ…ကျမဗိုက်သားနဲ့ချက်တွေကိုနမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့….သူဘယ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာကျမသိနေပါတယ်……. ကျမဘ၀မှာကိုကြီးနဲ့တွေ့မှစတင်ခံစားဖူးတဲ့….စောက်ဖုတ်အယက်ခံတဲ့အရသာကို…ခံစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိက….ရင်ထဲမှာကော….အဖုတ်ထဲမှာပါတလှပ်လှပ်နဲ့ ကြိုတင်ခံစားနေရပါတယ်….. “ချာတိတ်…” “ရှင်….ကိုကြီး…”ကျမမောဟိုက်တိုးညှင်းစွာထူးလိုက်ပါတယ်… “ကိုကြီး…ချာတိတ်စောက်ဖုတ်လေးကိုယက်ချင်တယ်ကွာ….နော်”…ကျမအဲလိုပြောတဲ့ကိုကြီးစကားလုံးတွေအောက်ပါ…ကျဆုံးနေရပါပီ………။ “အင်း….ကိုကြီးသဘော”လိုပြောလိုက်ပေမယ်…ကျမပေါင်အတွင်းသားလေးတွေကိုသာသူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့နမ်းရင်း…ကျမစောက်ဖုတ်စီကိုရောက်လာလိမ့်နိုးမျှော်နေတဲ့ ကျမမျှော်လင့်ချက်ကတော့မပြည့်သေးပါဘူး….ကျမလဲဖင်ကိုကော့ရင်း…ကိုကြီးပါးစပ်နဲ့ကျမစောက်ဖုတ်လေးတွေထိအောင်လိုက်ရွေ့ပေးပေမယ်….ကိုကြီးကဟိုဒီ သာပြောင်းနေတယ်…ကျမစောက်ဖုတ်ကိုလုံးဝမယက်သေးပါဘူး……။
ကျမ…..ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်နေပါပီ…နောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တော့ဘဲ….. “ကိုကြီး….အားဖြူစောက်ပတ်ကိုယက်ပေးပါတော့….”ကျမပေါက်ကွဲထွက်သွားပါပီ….နှုတ်ကနေအော်ဟစ်ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေဟာ….ကျမကိုယ်တိုင်မဟုတ်ရဲ့ လားလို့……ထင်မှတ်မှားလောက်အောင်ပါဘဲ…… “ယက်ချင်တာပေါ့ချာတိတ်ရယ်…..ချာတိတ်စောက်ပတ်လေးကိုဖြဲပေးနော်…ကိုကြီးယက်ဖို့လေ..”…ကိုကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ကျမလဲချက်ခြင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုဖြဲပေးလိုက်တယ်……ကျမစောက်ပတ်ဖွေးဖွေးလေးဟာအမွှေးအမြင်ကင်းစင်ပီး…..ကျမဖြဲလိုက်တဲ့အတွက်..အစေ့လေးဟာပြူးထွက်လာပါတော့တယ်… ကိုကြီးကအဲဒီအစေ့လေးကိုချိုချည်စုပ်သလို….တယုတယလေးငုံစုပ်လိုက်တဲ့အခါ….ကျမ…လောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသလို…..အရာအားလုံးဟာကိုကြီးရဲ့ စောက်စေ့စုပ်ပေးနေတဲ့အရသာအပေါ်မှာသာ….အပြည့်အ၀ခံစားနေမိပါတော့တယ်……
“အင်းးးးးးး”ကျမလည်ပင်းကြောတွေထောင်ပီး….ခေါင်းမော့ကာအသက်ကိုမနဲ့ရှူသွင်းနေရပါတယ်…..အစေ့လေးကိုစုပ်နေရာကနေ…ကျမစောက်ပတ်အ၀ လေးကိုလျှာလေးနဲ့ထိုးစွမွှေနှောက်နေပါတော့တယ်….ကျမအသက်ငင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်လို….အသံပေါင်းစုံလည်ပင်ထဲကအစ်ထွက်၇င်း….လူးလွန့်နေမီပါတော့တယ်.။ “ချာတိတ်….လိုးရအောင်နော်….”ကိုကြီးကပြောလဲပြော……ဘောင်းဘီကိုအောက်ဆွဲချွတ်ရင်း…ကျမပေါင်ကြားမှာနေရာယူလိုက်ပါတယ်……..။ “အင်း….လိုး….လိုးပါတော့…ဖြူကိုလိုးပေးပါတော့…”ကျမအရမ်းဆာလောင်နေပီလေ…..ဘာအရှက်…ဘာအကြောက်တရားမ…မရှိတော့ပါဘူး………..။ ကိုကြီးလီးဒစ်ကြီးဟာကျမစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားကို….ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာသလို….ကျမပေါင်တွေဟာလဲ….သွေးသွားအလိုအရ…အလိုလိုထောင်ကားသွားပါတယ်။
“အား……အင်း…..အားကိုကြီးးးးးးးးးးး”ကျမစောက်ပတ်ထဲမှာအပြည့်အသိပ်….လေဟာနယ်မရှိ….အရသာပေါင်းများစွာပေးနေတဲ့လီးကြီးဟာ…တဖြည်းဖြည်းချင်း တရစ်ချင်း…ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာလိုက်….ပြန်ထွက်သွားလိုက်…ကျမစောက်ပတ်လေးဟာလဲ….ဟာသွားလိုက်…ပြည့်အင့်သွားလိုက်နဲ့……ကျမအောက်ကနေကော့တက်လိုက် ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့….စည်းချက်ကိုက်နေတာ…ကိုယ်ဖာသာတောင်သတိမထားမိအောင်ပါဘဲ…. “ချာတိတ်လေး….” “ကိုကြီး….” “ကောင်းလားဟင်ချာတိတ်” “အရမ်းကောင်းတယ်..ကိုကြီးရာ” “ဘာကောင်းတာလဲဟင်ချာတိတ်” “ကိုကြီးလိုးတာလေ….ဟိုးဖြူစောက်ပတ်ထဲကအရမ်းကောင်းတယ်”ကဲအဲဒါကျမလားလို့တောင်မေးယူရမလိုဘဲ….ကျမနှုတ်ကထွက်တာတွေဟုတ်ရဲ့လားတောင်မေးယူရမလိုပါ။ “အင့်….အား….ရှီး…အား…အင့်အင့်အင့်”ကျမအသံပေါင်းစုံထွက်နေသလို…ကိုကြီးကလဲအပေါ်ကနေလက်ထောက်ရင်းမှန်မှန်စောင့်လိုးနေပါတော့တယ်….။ ကျမယောင်္ကျားဆိုဒီလိုအချက်တွေအများကြီးမလိုးနိုင်ပါဘူး…..၁၀ ချက်လောက်လိုးလိုက် အချက် ၂၀ လောက်လိုးလိုက်…နားလိုက်နဲ့စပ်တငန့်ငန့်ကြီး…ကိုကြီးကတော့… အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး….စလိုးကတည်းက…တစ်ချက်မ မနားဘဲအချက်ပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ပါဘူး……ကျမ…ပီးသွားလိုက်….ပြန်ကောင်းလာလိုက်နဲ့…..။ “ကိုကြီး…တော်ပါတော့…ဖြူဒူးတွေတုန်နေပီ”ကျမတားယူတော့မ…ကိုကြီးအလိုးရပ်ရင်းကျမနို့တွေကိုငုံစုပ်ပေးနေတယ်….။
ခဏနေတော့…ကိုကြီးကသူ့လီးကြီးကိုကျမထဲကနေထုတ်လိုက်တယ်………ပီးတော့ကုတင်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်….ကျမလဲဘာလိုပါလိမ့်ဆိုပီးကြောင်ကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ “ချာတိတ်လေး….ကုတင်စောင်းမှာလိုးရအောင်နော်…”ကျမလဲခေါင်းညိမ့်ပြရင်း….ကုတင်စောင်းကိုလူရွှေ့ကာ….ကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုကုတင်အောက်တွဲလောင်းချထားလိုက် တယ်……ကျမတင်က…ကုတင်စောင်းမှာတင်နေတော့…စောက်ဖုတ်လေးကအထက်ကိုခုန်းထနေတာပေါ့…ကိုကြီးက…အောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေတဲ့ကျမခြေထောက် တွေကိုအသာလက်နဲ့မရင်း…ကျမပေါင်ကြားကိုနေရာယူကာ…သူ့လီးကြီးနဲ့ကျမစောက်ပတ်လေးကို…စလိုးပါတော့တယ်… “အား…ဖြေးဖြေးကိုကြီး…ထိတယ်..အရမ်းထိလို့”ကျမတောင်းပန်သံကို…မကြားတာလား….ဒါမဟုတ်ဂရုမစိုက်တာလားတော့မသိဘူး…ကိုကြီးကတစ်ချက်လေးမ မလျော့ဘဲ ဆက်တိုက်လိုးစောင့်နေပါတော့တယ်…. “အား….အား…အင်းအ…အ..အ…အ….” “အား…အအ….အ….ကိုကြီး…အ….အင်း….“ “ချာတိတ်ကိုကြီးပီးတော့မယ်….” “ဟုတ်….ပီးလိုက်အ…အ..အား….အား…အ..အ….အ…” “ပီးတာသိတယ်မလားဟင်ချာတိတ်“ “အင်း…သိတယ်…အားးးအားးးးးးးးးးအအအအအအ” “ဘာလဲပီးတာ…သိတယ်ဆိုပြောကွာချာတိတ်” “အား…ကိုကြီးလရေတွေ…ဖြူစောက်ပတ်ထဲ…ပန်းထည့်တော့မှာလေ….အ…အာ…” “ဘယ်လိုလုပ်ပန်းထည့်မှာလဲဟင်ချာတိတ်လေးးးး” “အား…လိုးရင်း…လိုးအ…လိုးရင်းပန်းထည့်မှာလေးအားအားးးးးးးးးးးးးးးးးးး”ပြောဆိုလိုးညှောင့်နေရင်းကနေ…ကိုကြီးလရေတွေကျမစောက်ပတ်ထဲကို…အရှိန်အဟုန်နဲ့ပန်းဝင် လာပါတော့တယ်….ကျမပြောမပြတတ်အောင်…ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ရှင်…..။
ကျမနဲ့ကိုကြီးတို့ဟာအမြဲထိတွေနေရပေမယ့်……အမြဲတန်းတော့မလိုးဖြစ်ပါဘူး..ကိုကြီးမအားတဲ့ခါတွေရှိသလို……ကျမအမျိုးသားအိမ်မှာရှိနေတဲ့ အခါတွေမှာလဲ…ကျမတို့ဟာခပ်တည်တည်ခပ်တန်းတန်းနေကြတာပါ……ကျမနဲ့ကိုကြီးမတွေဖြစ်တာအခုဆို ၁၀ ရက်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါပီ…..ကျမကို…ကိုကြီးက ဖုန်းထဲကနေအမြဲလိုလိုလှမ်းပီး…သတိရကြောင်း…တွေချင်ကြောင်းပြောနေပေမယ်…..လက်တွေမှာအခက်အခဲတွေကိုယ်စီနဲ့မို့ဒီလိုဘဲ…မြင်သာမြင်မကျဉ်ရဆိုသလို နီးလျှက်နဲ့ဝေးနေကြဆဲပါ……ဒီနေ့လဲကိုကြီးအလုပ်များနေလို့….စခန်းထဲမှာရှိနေပေမယ်….ကျမတို့အိမ်ဖက်ကိုကူးမလားနိုင်ပါဘူး….ဘာတွေအလုပ်များနေတာဆိုတာ တော့ကျမ မသိပေမယ်…..အလုပ်ရှုပ်နေမှန်းတော့ကျမကောင်းကောင်းသိပါတယ်….ကျမလဲကိုကြီးလာရင်….အလှပြချင်တာနဲ့…ရေမိုးချိုးပီးထုံးစံအတိုင်း….ခါးတိုလေး နဲ့ စပန့်ကောင်းဘီရှည်အပျော့လေးကိုဝတ်ထားပီးအသင့်စောင့်နေမိပါတယ်….ကျမအမျိုးသား ကိုမျိုးဟာလဲ….၀င်လိုက်ထွက်လိုက်….အလှုပ်များနေတာအိမ်ကနေ… လှမ်းမြင်နေရပါတယ်….. …ဘယ်စီကိုမင်းရောက်နေလဲ……ဘာတွေကိုမင်းလုပ်နေလဲ…..ကျမအိမ်ရှေ့စက်တီပေါ်ထိုင်ငေးနေတုန်းဖုန်းသံမည်လာတာနဲ့ဖုန်းကိုကြည့်လိုက်တော့…ကိုကြီးဖုန်းဖြစ်နေတယ်…
စခန်းနဲ့အိမ်ကလှမ်းမြင်နေရတာ….ပီးတော့…….. ၆ ပေလောက်ကွာတာကို….ဘာလိုဖုန်းဆက်တာလဲပေါ့ကျမလဲ…ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်တယ်…. “ဟလို…ကိုကြီးပြောလေ..” “ချာတိတ်အရမ်းလှတယ်….အမောကိုပြေသွားတာဘဲသိလား…”…သူပြောမ ကျမထိုင်နေတဲ့နေရာကို သူအခန်းထဲကနေလှမ်းမြင်နေရမှန်းသတိထားမိတယ်.. အုတ်ချပ်လေးတွေထောင်ပီး…လေ၀င်ပေါက်သဘောမျိုးဖောက်ထားတဲ့နေရာကနေမြင်နေရတာကိုး…ကျမလဲလှမ်းပီးလျှာထုတ်ပြလိုက်တယ်……. “အပိုတွေ…..လှပါဘူး”…ကျမခပ်ချွဲချွဲလေးပြောလိုက်တာပေါ့…. “အရမ်းလွမ်းတယ်ကွာ…မတွေ့ရတာကြာပီ…”……ကိုကြီးကျမကိုအရမ်းတွေချင်နေသလို…ကျမလဲတွေချင်တာပါဘဲ….ကျမလဲဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကို အမြဲလိုလိုတွေးနေမိတာပါ….. “ချာတိတ်လေး…အိမ်ရှေ့ခန်းထွက်လိုက်…” “ဘာလို…” “အော်…ချာတိတ်ကလဲခိုင်းစရာရှိလိုပေါ့…နော်” ကျမလဲကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်ရှေ့ခန်းကိုထွက်လိုက်တယ်…..
အိမ်ရှေ့ခန်းဆိုတော့ကျမကိုတစ်ကိုယ်လုံးလှမ်းမြင်နိုင်တာပေါ့…ကျမလဲဖုန်းကိုင်ရင်းအိမ်ရှေ့ခန်း ထွက်လာလိုက်တယ်……ကိုကြီးဘာခိုင်းမလိုလဲပေါ့….. “ချာတိတ်…ကိုကြီးစာအုပ်ဘီဒိုအောက်မှာ..မနေ့ကပင်တခုကျနေတာရှိသေးလားကြည့်ပေးပါအုန်း” ကျမလဲသူပြောသလို…ဘီဒိုအောက်ကိုကုန်းကြည့်လိုက်တာပေါ့….မှောင်နေလို့လား…..သူပြောတဲ့ပင်ကသေးလို့လား…မတွေဘူးဖြစ်နေတယ်ကျမလဲအတတ်နိုင်ဆုံး ဘီဒိုအောက်ကိုခေါင်းဝင်ပီးကြည့်တာပေါ့….. “အားး…ချာတိတ်အဲလိုလေးနေ..အရမ်းမိုက်တယ်ကွာ…” ကျမသိလိုက်ပီ…ဘာပင်မဘီဒိုအောက်မှာမရှိဘူး……သက်သက်ကျမကိုသူဖက်ဖင်ကုန်းပြအောင်လုပ်တာဆိုတာကို…..ကိုကြီးကအဲလိုမထင်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ ကျမကိုဆွဲဆောင်နေတာလားလိုထင်မိတယ်….အခုလဲကြည့်ကျမဘီဒိုအောက်ကဘဲပြန်ထွက်ရမလား….ကိုကြီးကိုဘဲဆက်ပီးဖင်ကုန်းပြနေရမလားပေါ့… ကျမဘောင်းဘီအပျော့သားနဲ့ဖင်ကုန်းနေတာဆိုတော့….ကျမနောက်ကနေကြည့်နေတဲ့ကိုကြီးစိတ်တွေဘယ်လောက်ထန်နေမလဲဆိုတာတွေမိရင်း…..ကျမလဲ စောက်ဖုတ်ထဲက…အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်လာပါပီ….. “ကိုကြီး….တော်ပီကွာ…ညောင်းနေပီ”လို့ကျမလှမ်းပြောလိုက်တယ်…..စိတ်ထဲမှာလဲအဲလိုကုန်းပြနေရတာ…တစ်မျိုးကြီးလေ….မပြောပြတတ်အောင်ဘဲ……. “ခဏလေးပါကွာ…ချာတိတ်ကလဲ…အလွမ်းပြေလေးနော်….အရမ်းမိုက်တယ်..ချာတိတ်ဖင်ကြီးက….လှလိုက်တာကွာ” ကျမလဲကိုကြီးဖုန်းထဲကပြောလေ…..စောက်ပတ်ထဲက…အရည်တွေထွက်လေ….ဖင်ကိုပိုထောင်ပေးမိတာပေါ့…….။
“ချာတိတ်လေး…..ကိုကြီးလာခဲ့မယ်နော်…အနီးကပ်ကြည့်ချင်တယ်ကွာ…”… “ဟလို…ဟလို…”ကိုကြီးကပြောပြောဆိုဆိုဖုန်းချသွားတော့…ကျမလဲကုန်းနေရာကနေထပီး…..အိမ်ရှေ့ခန်းထဲဝင်…….စောစောကထိုင်နေတဲ့ခုံလေးပေါ်ပြန်ထိုင် နေတာပေါ့….. ခဏနေတော့…ခြေလှမ်းကြဲကြီးတွေနဲ့ကိုကြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတာတွေလိုက်တယ်…..ကျမရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေရင်းသူ့ကိုကြည့်နေမိတယ်…….။ ကိုကြီးကအိမ်ပေါ်တက်လာရင်း….သူဘက်ချမ်းကအလုပ်စားပွဲမှာခပ်တည်တည်နဲ့ထိုင်ရင်းကျမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်…..ကျမလဲကိုကြီးဘာပြောလာမလဲ…..။ ဘာတွေစေခိုင်းလာမလဲဆိုတာကိုငန့်လင့်ရင်း…….သူမျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်နေမိတာပေါ့…..။..ကိုကြီးကသူ့နားလာဖို့ကျမကို…မျက်ရိတ်လေးနဲ့ပြတော့…… ကျမလဲအသာထပီး….သူစားပွဲနားသွားလိုက်တယ်……ကိုကြီးထိုင်နေရင်းကနေကျမခါးလေးကိုဖက်ကာ……တင်သားလေးတွေကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်ခြေမွပေးနေတယ်….။ ကျမလဲဘေးဘီကိုကြည့်ရင်း…… “ကိုကြီး…..တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားအုန်းမယ်ကွာ” “ချာတိတ်ကလဲ…ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲကွာ..”ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်…ကိုကြီးအလုပ်စားပွဲနားက…အပြင်ကနေလှမ်းမမြင်နိုင်ဘူးလေ….အိမ်ထဲဝင်လာမသာမြင်ရတာ…။ ပြောပြောဆိုဆိုကိုကြီးက….ကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေပွတ်သပ်ပေးလာတော့…..ကျမပေါင်လေးကားပေးလိုက်မိတယ်…..။ကျမအရည်တွေဟာ…..။ ဘောင်းဘီလေးတောင်ဆိုနေပီလေ……ကိုကြီးကဖင်သားတွေကိုခြေမွလိုက်…..စောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ်သပ်လိုက်လုပ်နေရင်းကနေ……..ကျမကိုထိုင်နေရာနေမော့ကြည့်ရင်း “ချာတိတ်လေး…မတွေ့ရတာကြာပီကွာ…အရမ်းလိုးချင်တယ်…” “အား…အတူတူဘဲကိုကြီးရာ….လစ်မ…မလစ်တာ”ကျမလဲပြန်ပြောလိုက်မိတယ်…. “အခုလွတ်လပ်တယ်လေ…..ကိုမျိုးလဲမရှိဘူး….ညမပြန်လာမှာ…သားလေးကလဲကျောင်းဆင်းဖိုအဝေးကြီးလိုသေးတယ်…” “လိုးရအောင်နော်..ချာတိတ်” ကျမလဲအရမ်းခံချင်နေပီလေ….ဟန်ဆောင်ညင်းဆန်ဖို့တောင်အင်အားမရှိတော့ဘူး….ခေါင်းလေးကိုသွက်သွက်ညိမ့်လိုက်တာပေါ့…..။
ကိုကြီးကထိုင်ရာကနေထပီး…….ကျမနှုတ်ခမ်းတွေက…လည်တိုင်တွေကိုနမ်းရင်းကနေ….နိုတွေကိုအင်္ကျီပေါ်ကနေကိုင်တွယ်ဖြစ်ညစ်ပေးနေလိုက်တာ…လူတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာနယ်ထဲရောက်နေသလိုပါဘဲ….။ “ချာတိတ်…အခန်းထဲကခေါင်းအုန်းတလုံးသွားယူခဲနော်…” ကျမချက်ခြင်းအခန်းထဲဝင်ပီးခေါင်းအုန်းယူလိုက်တာပေါ့….သူနားပြန်ရောက်တော့ကိုကြီးက…သူအလုပ်စားဘေး..ချောင်လေးထဲမှာခေါင်းအုန်းကိုချထားလိုက်တယ်……. ကျမကိုလဲအဲဒီချောင်လေးထဲကိုဆွဲခေါ်ရင်း….. “ချာတိတ်ခေါင်းအုန်းပေါ်ဒူးထောက်ပီးကုန်းလိုက်…” ကျမသူပြောသလိုခေါင်းအုန်းပေါ်ဒူးလေးထောက်ပီးကုန်းလိုက်တယ်…..ကိုကြီးကနောက်ကနေကျမကိုစိုက်ကြည့်နေပီး…….သူပုဆိုးထဲကလီးကြီးကိုပုဆိုးပေါ်ကနေပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်နေတာမြင်နေရတယ်….. “ချာတိတ်…..ဘောင်းဘီလေးကိုပေါင်လယ်လောက်ထိချွတ်လိုက်” ကျမကိုကြီးပြောသလိုဘောင်းဘီကိုပေါင်လည်လောက်ထိချွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကျမဖင်သားဖွေးဖွေးလေးနဲ့….ဖင်ကြားထဲကစောက်ပတ်လေးကကိုကြီးကိုဖိတ်ခေါ်နေ ပီဆိုတာသိလိုက်မိတယ်…….ကိုကြီးကထိုင်ခုံကနေကျမနားလာပီးကျမဖင်သားတွေကိုပွတ်သပ်လိုက်….ဖင်သားနှစ်ဖက်ကိုဖြဲလိုက်စေ့လိုက်လုပ်ရင်း…..ဖင်ကြားထဲကနောက် ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ကျမစောက်ပတ်လေးကိုယက်တော့တာပါဘဲ…..ကျမဖင်ကြီးကိုဟိုရမ်းဒီရမ်းလုပ်ရင်းကနေတအင်းအင်းညီးညူနေမိတာပေါ့….
“ချာတိတ်ခံချင်ပီလား” “ဟုတ်…ခံချင်ပီကိုကြီးရာ….လိုးပေးတော့နော်…” “ဒီနားမလိုးချင်ဘူးကွာ…ချာတိတ်တို့လင်မယားလိုးတဲ့ကုတင်ပေါ်မှာလိုးချင်တာ” “ကိုကြီးသဘောလေ….” “အဲဒါဆိုအခန်းထဲသွား….အလိုးခံဖို့အသင့်စောင့်နေနော်….အသင့်ဖြစ်ရင်ကိုကြီးကိုခေါ်လိုက်” “အာကိုကြီးကလဲ….လှမ်းခေါ်ရင်..သူများတွေကြားကုန်းမှာပေါ့”ကျမပြောလိုက်တော့.. “ဖုန်းနဲ့ခေါ်လေ….သူများတွေမကြားတော့ဘူးဟလား”အဲလိုထူးထူးဆန်းဆန်း….အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ကျမကို….စိတ်လှုပ်ရှားစေတာ…ကိုကြီးတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လေ…။ ကျမလဲ….ကုန်းနေရာကအသာထပီး…..အိပ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်….အခန်းထဲရောက်တော့…အ၀တ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပီး…..အသင့်ဖြစ်တာနဲ့ဖုန်းယူပီး…… ကိုကြီးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်…..တစ်အိမ်ထဲ….အိမ်ရှေ့ခန်းနဲ့…အိပ်ခန်းဖုန်းဆက်ရတာ…ရီတော့ရီချင်တာ….ပီးတော့စိတ်ထဲလဲတစ်မျိုးကြီး…..အလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်တာကို ကိုယ့်လိုးမဲ့သူကိုလှမ်းပြောရမှာဆိုတာကလဲ…..စိတ်ကိုပိုထစေသလားဘဲ….. “ချာတိတ်လေး….အသင့်ဖြစ်ပီလား”ကိုကြီးကဖုန်းကိုင်ရင်းမေးသံတစ်ဆက်ထဲထွက်လာတယ်… “ဟုတ်ကိုကြီး…အသင့်ဖြစ်ပီကွာ….လာခဲ့တော့…” “ဘာအသင့်ဖြစ်တာလဲချာတိတ်လေးရာ…” “ကိုကြီးအလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေပီ….နော်ကိုကြီးလာခဲ့တော့” “ဘာလုပ်လာရမှာလဲ..ပြောလေ” “ဖြူကိုလာလိုးပါတော့ကိုကြီးရယ်….ဖြူလေကိုကြီးအလိုးခံဖို့အသင့်ဖြစ်နေပီ“ကျမအဲလိုပြောလိုက်တာနဲ့တင်…ပီးချင်ချင်ဖြစ်သွားတာအံ့သြမိတယ်….
လိုးတောင်မလိုးရသေးဘူး “ချစ်တယ်ချာတိတ်ရာ…ပြန်ခေါ်ပါ့လားအဲလိုလေး…အရမ်းနားထောင်ကောင်းလိုနော်ချာတိတ်”ကိုကြီးအသံကတုန်ရီနေပီး…တကယ်ဖီးဖြစ်နေတာသိသာတယ်…ကျမလဲအရမ်း ထကြွနေပီဆိုတော့… “ကိုကြီး…ဖြူကိုလားလိုးပေးတော့နော်…ဖြူစောက်ပတ်လေးကိုကိုကြီးလီးနဲ့လာလိုးပေးပါတော့….ဖြူအရမ်းခံချင်နေပီး…”ကျမပြောရင်းကိုယ့်စောက်ပတ်လေးကိုယ်ပွတ်လိုက် မိတဲ့အထိပါဘဲ….. ကိုကြီးဝင်လာပီးကုတင်ဘေးမှာရပ်ကာ ကျမကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့ပက်လက်အိပ်နေတာကိုကြည့်ပီး…..သူ့အ၀တ်အစားတွေချွတ်လိုက်တယ်….ပီးတော့ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လာ ပီးကျမပေါင်ကြားမှာနေရာယူရင်းကျမပေါင်နှစ်ချောင်းကိုမလိုက်တယ်…. “ချာတိတ်…လိုးမယ်နော်” “အင်း…လိုး…လိုးပေးကွား” “ချာတိတ်ကိုယ့်လီးကြီးကို…ချာတိတ်စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပေးပါ့လား….”ကျမစိတ်တွေအမြင့်ဆုံးကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားပါပီ…ခေါင်းသွက်သွက်ညိမ့်ရင်း…..ကိုကြီးလီးကြီးကိုလှမ်း ကိုင်ကာ…ကျမစောက်ပတ်ဝလေးမှာတေ့ပေးလိုက်ပါတယ်….. “အား…အင်း….၀င်တယ်…ကိုကြီး…၀င်လာပီးဖြူစောက်ပတ်ထဲကို…ကိုကြီးလီးကြီးအားးးးးးးးးး”ကျမစကားလုံးတွေ…ညီးညူသံတွေနဲ့အတူ……စောက်ပတ်ကိုလဲကော့ပေးလိုက် မိပါတယ်…. ကိုကြီးရဲထုံးစံအတိုင်းစလိုးပီဆိုကထဲက…..ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့တစ်ချက်ခြင်း…..နောက်မြန်မြန်…နောက်စောင့်လိုက်….နည်းမျိုးစုံနဲ့မရပ်မနားလိုးပေးနေတာပေါ့……။
ကျမလဲကာမအရာသာရဲ့ အနိမ့်အမြင့်……အပူအအေး…စတဲ့ခံစားမှုတွေကို….ရင်ခုံလှိုက်မောစွာခံစားရင်း…..အောက်ကနေစည်းချက်ညီညီ….ညီလိုက်..အော်လိုက်….. ကော့လိုက်…ကားလိုက်ခံနေမိပါတော့တယ်………။ ကျမ ၃ ခါလောက်ပီးလို့…ကိုကြီးလီးမှာလဲကျမစောက်ရေဖြူဖြူပြစ်ပြစ်တွေ…..ပေပွနေပါပီ….ကျမလဲမောဟိုက်တုန်ရီနေပီး….တစ်ကိုယ်လုံး….နုန်းချီလိုက်မောနေပီလေ… “ချာတိတ်လေး…..လရည်တွေလိုချင်ပီလား”ကိုကြီးက မှန်မှန်လိုးနေရင်းကနေလှမ်းမေးလာတော့…ကျမလဲချက်ချင်းဘဲ…. “လိုချင်ပီ…ကိုကြီး…ဖြူစောက်ပတ်ထဲကို..လရည်တွေပန်းပေးပါတော့…“ “ကိုကြီးဖြူစောက်ပတ်ကို…လိုးရင်းပန်းထည့်ပေးနော်….“အား….ကိုကြီး………အင်းးးးးး ကိုကြီးကအလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်သလို……ကျမပြောနေတုန်းမှာဘဲ….သူလရည်တွေကို…..ကျမစောက်ပတ်အတွင်းထဲ….ပန်းထည့်လိုက်သလို….လိုးချက်တွေကလဲ အင်နဲ့အားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုးလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်..။ကျမဟာကိုကြီးရဲ့တစ်ခါနဲ့တစ်ခါ….မရိုးနိုင်သော…ဆန်းသစ်မှုတွေ…….ရင်ခုန်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့….ကာမစိတ်ကိုသဘောကျမိနေပါပီ…။ ကိုကြီးဟာနည်းလမ်းတွေ….စိတ်ကိုဖမ်းစားမှုတွေဟာ…တစ်ခါနဲ့တစ်ခါမတူရအောင်…မမြဲမထင်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပေးနေတုန်းပါဘဲ…….။သာယာမိတာအမှား လားအမှန်လဲမဝေခွဲတတ်အောင်ပါဘဲ……။
ဒီနေ့ကိုမျိုးအိမ်မှာနားတဲ့ရက်ဆိုတော့…..နေ့လည်အေးအေးဆေးဆေး…လင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်ရှေ့မှာအသုပ်စားရင်း….. တီဗီ ထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့…..။ နေ့လည် ၁ နာရီလောက်မှာကိုကြီးအိမ်ကိုရောက်လာတယ်….ထုံးစံအတိုင်း….သူအလုပ်တွေနဲ့သူ…စားပွဲမှာအလုပ်များနေတာပေါ့…။ ကိုမျိုးလဲဘေးကနေကိုကြီးအလုပ်တွေကို ကူလုပ်ပေးနေတာနဲ့…..ကျမလဲ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလေးဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်…။ ကျမဇာတ်ကားသာကြည့်နေရတယ်……စိတ်က ကိုကြီးစီမှာရောက်နေတာလေ…..ကျမကိုယ်ကျမလဲ….စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်…..ကျမအသက်အရွယ်….ကျမအနေ အထားက…….အခုမကြီးမ၀က်သက်ပေါက်တယ်ပြောရမလား…….ဒုတိယအရွယ်ရောက်မ….ပထမဝေဒနာကိုခံစားမိတယ်ပြောရမလား…….ဘယ်လိုပြောရမယ်မှန်းမသိ တော့ပါဘူးရှင်….။ ကိုကြီးနဲ့ကိုမျိုးကတော့…..အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့အလုပ်များနေတာပေါ့…..ကိုမျိုးက…ကျမကိုကျောခိုင်းထားပီး….ကိုကြီးက မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားပါ…။
ကျမ….ဇာတ်ကားကြည့်လိုက်….ကိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့…..ဗျာများနေတုံး….ကိုကြီးထလာတာတွေလိုက်တယ်…..ကျမလဲခပ်တည်တည်ဘဲဇာတ်ကားကိုအာရုံစိုက်နေ သလို……တီဗီ ကိုဘဲမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတာပေါ့…..ကိုကြီးက….ကျမရှေ့က စက်တီစားပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့….ဆားငန်စေ့ဘူးလေးထဲက….ဆားငန်စေ့လေးတွေကို…… အသားများတဲ့အလုံးလေးတွေရွေးရင်း….ကျမမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေတာ…ကျမ…မျက်လုံးဒေါင့်ကနေမြင်နေရတယ်…..ခဏနေတော့….ကိုကြီးလက်ထဲကစာရွက်ပိုင်းလေး တစ်ခု….ကျမရင်ခွင်ထဲပစ်ပေးပီး…..အလုပ်စားပွဲကိုပြန်သွားတယ်….ကျမ…ကိုမျိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့…..ကျမကိုကျောပေးရင်း….အလုပ်တွေဆက်လုပ်နေတယ်….. ဘာမသိလိုက်ပုံမရဘူး…..ကျမလဲကိုကြီးပစ်ချသွားတဲ့စာရွက်ပိုင်းလေးကိုအသာပေါင်ကြားထဲဖြည်ကြည့်လိုက်တော့……ချာတိတ်…လွမ်းတယ်….အောက်စလွှတ်ပြ……တဲ့။ ကျမ..မျက်လုံးပြူးသွားတယ်….ချက်ခြင်းကိုကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့…ကိုကြီးကအေးအေးဆေးဆေးဘဲ…..ဆားငန်စေ့စားရင်းအလုပ်လုပ်ကာ….ကျမကိုလှမ်းကြည့်နေ တယ်…..ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…..ကျမစောက်ဖတ်လေးကို….အကြိမ်များစွာလိုးလိုက်…..ယက်လိုက်…..လုပ်နေတဲ့ကိုကြီးက……ကျမဟာလေးကိုအောက်စလွှတ်ပြခိုင်း နေတာ…ထူးဆန်းမနေဘူးလား….. ကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေးနေမိတယ်…….အောက်စလွှတ်ပဲပြရမလား….ဟင့်အင်းလိုခေါင်းရမ်းပြလိုက်ရမလား……အောက်စလွှတ်ပြတုန်းကိုမျိုးနောက်လှည့် ကြည့်လိုက်ရင်ကော….အို….ကျမအတွေးများစွာနဲ့…..ရင်တွေဆူပွက်နေတာပေါ့….အဲဒါကိုကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ပါဘဲ…..ဘယ်လိုအချိန်…ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျမကို…..အံ့သြ… ထိတ်လန့်….ရင်ခုန်စေမလဲဆိုတာမသိနိုင်အောင်…..ထူးဆန်းတဲ့ရင်ခုန်သံတွေပေးတတ်တဲ့သူပါ…..။
ကိုကြီးက…တစ်ချက်တစ်ချက်…ကျမကိုလှမ်းကြည့်ရင်း…..သူ့မျက်လုံးတွေက…ကျမပေါင်ကြားကို…လှမ်းကြည့်လိုက်…ကျမမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်နဲ့…. စောင့်နေသလိုလုပ်နေတော့….ကျမဟာ….နောက်ဆုံး…..ကိုမျိုးအခြေအနေအကဲခတ်ရင်း……ပေါင်လေးတစ်ချောင်းကိုထောင်ပီး…..ဂါဝန်လေးကိုအောက်စလွှတ်ပေး… လိုက်တယ်……ကိုကြီးနေရာကနေလှမ်းကြည့်ရင်…ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာတဲ့အနေအထားပါ…..ကျမအောက်စလွှတ်ပြလိုက်တော့….ကိုကြီးကနှာခေါင်းရှုံ့ရင်း……… ခေါင်းကိုမသိမသာရမ်းပြတယ်…ဟုတ်တယ်လေ….ကျမအောက်ခံဘောင်းဘီကြီးနဲ့ကို….သိတာပေါ့…..ကျမလဲစချင်စိတ်ပေါ်လာပီး…..ကဲမှတ်ပလားဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ ပြုံးစစပြန်ကြည့်ပလိုက်တယ်……။ကိုကြီးကမျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ဘောင်းဘီသွားချွတ်ဖို့လုပ်ပြတော့….ကျမလဲ…..ခေါင်းရမ်းပြလိုက်တယ်……။ ကိုကြီးကစားပွဲအောက် ကနေ…ကျမကို….လက်သီးဆုပ်ပြတယ်…..ကျမလဲလျှာထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့…..ကိုကြီးတို့အလုပ်စားပွဲကအမြင့်….ခါးစားပွဲ…ကျမဆက်တီကအနိမ်ဆိုတော့…… စားပွဲအောက်ကနေကိုကြီးလုပ်ပြတာမြင်နေရတာပေါ့….ကိုမျိုးကနေမမြင်ဘူးလေ…..။ကိုကြီးကအလုပ်ကိုပြန်ဆက်လုပ်ရင်း…..ကျမကိုသွားဖို့မေးငေါ့ပြလိုက်…….စားပွဲ အောက်ကနေ…..လက်သီးထောင်ပြလိုက်လုပ်နေတာကို..ကြည့်ရင်းရီနေမိတယ်…အဲအချိန်မှာဘဲကိုကြီးက…..သူ့ပုဆိုးကိုပေါင်ရင်းထိလှန်တင်လိုက်ပီး……..စားပွဲ…. အောက်ကနေ….လီးကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့….ကျမထိုင်ရမလို….ထရတော့မလိုဖြစ်သွားတယ်……ကိုမျိုးမမြင်နိုင်မှန်းသိပေမယ်….ကျမစိတ်ထဲမှာကိုမျိုးသိသွားရင် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ထိတ်လန့်နေမိတယ်…..ကိုကြီးက….သူ့လီးကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွတ်ပြရင်း…အပေါ်ဘက်ကတော့အလုပ်ကိုဟန်မပျက်လုပ်နေတယ်……….။ နောက်တော့…ကျမလဲကိုမျိုးမသိနိုင်တာသေချာတော့….ကိုကြီးလီးကြီးကိုငေးကြည့်နေမိတယ်….ဒီလီးကြီးနဲ့ငါ့ကိုလိုးတာပါ့လားဆိုတဲ့အသိကလဲ….စိတ်ကိုထကြွလာ စေတယ်လေ…..။ပြောရရင်….ကျမအလိုးသာခံတာ….ကိုကြီးလီးကိုသေသေချာချာ…..စေ့စေ့စပ်စပ်အခုလိုမကြည့်ဖူးဘူး…..အခုလိုမြင်ရတော့စိတ်ထဲ့ပိုထကြွလာသလို စောက်ဖုတ်လေးဟာလဲ….မို့ဖောင်းပီး…အရည်တွေစိမ့်ထွက်လာတယ်….။
ကိုကြီးက လီးကြီကို ဆပ်ခနဲဆပ်ခနဲ…..လှုပ်ပြလိုက်ချိန်မတော့….ကျမစောက်ပတ်လေးထဲက စစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့….ကျင်သွားပါတယ်……ကျမထိုင်ရာကနေထပြီးအခန်းထဲဝင်သွားမိတယ်…..ပီးတော့အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကိုချွတ်ပီး…..ဂါဝန်လေးကိုသေသပ်….. အောင်ပြန်လုပ်ပီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်…..အခန်းထဲကထွက်လာရင်း….ကိုကြီးမျက်နှာကိုလဲ….ရမက်ခိုးတွေပြည့်နေတဲ့ကျမရဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်း…….. စောစောကထိုင်တဲ့နေရာထက်…ရှေ့ပိုကျပီး….ကိုကြီးနဲ့ပိုနီးတဲ့ခုံလေးကိုပြောင်းထိုင်လိုက်တယ်……..ကိုကြီးမျက်ဝန်းတွေဟာ….မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အရောင်တောက် နေသလို…..ရီဝေပီးကျမပေါင်ဂွကြားကိုစိုက်ကြည့်နေတာပေါ့……ကျမပေါင်လေးကိုထောင်ပီး….ဂါဝန်အောက်စလေးကိုလှပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ……စောက်ပတ်လေးဟာ ပေါင်ဂွကြားမှာ…….ဟဟလေးပေါ်ထွက်လာတာပေါ့…..ကျမစောက်ပတ်လေးကိုလက်နဲ့ပွတ်ပြရင်း…..ကိုကြီးလီးကြီးကိုလဲ….စိုက်ကြည့်နေမိတယ်…….။ကိုကြီးလီးကြီး တဆပ်ဆပ်တောင်နေသလို…..မျက်လုံးတွေကလဲ…..ကျမစောက်ပတ်လေးစီကနေမခွာတန်းကြည့်နေတာ…..ကျမရင်တွေတဒိုင်းဒိုင်းခုံရင်းတွေမြင်နေရပါတော့တယ်….။ကိုကြီးလီးကြီးကိုကြည့်ရင်း…..ကျမကိုယ့်စောက်ပတ်လေးကို…ပွတ်ရတာအရသာတစ်မျိုးဘဲ…..ရင်တွေလဲခုန်သလို…..ဖီးလဲအရမ်းတက်တာဘဲ..။ ကိုကြီးလဲကျမစောက်ပတ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်….စားပွဲအောက်ကသူလီးကြီးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတယ်……ခဏနေတော့ကိုကြီးက….။ “ကိုမျိုး….ငါးကင်သွားဝယ်ကွာ….စားရအောင်….ခလေးလဲတခါထဲကြိုလာခဲ့” “ဟုတ်ဆရာ…သွားလိုက်မယ်”လိုခိုင်းသံကြားလိုက်တယ်….ကျမလဲထောင်ထားတဲ့ခြေတောက်ကိုအောက်ချပီး….ဇာတ်ကားကြည့်နေလိုက်တယ်….။ “ဖြူ…ကိုသားကြိုရင်းငါးကင်သွားဝယ်မလို…ဘာမှာအုန်းမလဲ”လိုမေးရင်းသူအပြင်သွားဖိုထလာတာပေါ့….ကျမလဲ….အခုမသူတို့ဖက်လှည့်ကြည့်ဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့……. “မမှာတော့ဘူး….ငါးကင်ကကြာမှာ…သားကိုကြိုတာနောက်ကျနေအုန်းမယ်”လိုပြောလိုက်တယ်….။
“မီပါတယ်….ငါးကင်က ၁ နာရီလောက်ကြာတာ…အေးဆေးပါ…အာဆိုသွားပီနော်မိန်းမ..” “ဟုတ်ကို….ဖြေးဖြေမောင်းနော်….” “အေးပါစိတ်ချ…”လိုပြောရင်းကိုမျိုးထွက်သွားတာ…အိမ်ပေါက်ဝထိလိုက်ပို့ရင်းကြည့်နေလိုက်တယ်…..ကိုမျိုးဆိုင်ကယ်နဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားတာသေချာတော့မှ အခန်းထဲပြန်ဝင်လာပီး….စောစောကခုံလေးမှာထိုင်ဖို့အသွား…..ကိုကြီးက “ချာတိတ်လာခဲ့….စောက်ပတ်ယက်ချင်နေပီ…”လိုကိုကြီးလှမ်းပြောသံကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်….တုန်ကနဲ့ဖြစ်သွားပီး….ကိုကြီးဘက်လှည့်ကြည့်ရင်းသူအနားကို လျှောက်သွားမိတာပေါ့…..။ အနားရောက်တော့….ကိုကြီးကထိုင်နေရာကနေကျမကိုမော့ကြည့်ရင်း…..သူ့လျှာကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်….ပီးတော့ကျမကိုခါးကနေသိုင်းဖက်ထားရင်း……. ဖင်သားတွေပွတ်လိုက်….ဂါဝန်ပေါ်ကနေစောက်ပတ်လေးကိုပွတ်လိုက်လုပ်နေတယ်……ကျမမျက်လုံးလေးမှိတ်….ခေါင်းလေးမော့…ပေါင်လေးကားရင်း……… နစ်မျောနေမိတာပေါ့…… “ချာတိတ်….ကာဝန်လှန်ပေးကွာနော်…”တဲ့… ကျမမတ်တပ်ရပ်ရင်းကနေ…..ဂါဝန်ကိုလှန်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ….ကိုကြီးကထိုင်ခုန်ပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းဒူးထောက်ထိုင်ရင်းကနေ….ကျမစောက်ပတ် လေးကိုပွတ်သပ်ရင်း…..ပေါင်တွေကိုနမ်းလိုက်…..ဆီးခုံလေးကိုနမ်းလိုက်လုပ်နေတာပေါ့….ကျမအရမ်းဟော့နေပီဆိုတော့…..ပေါင်တွေကိုကားပီးခြေဖျားထောက် ကာ…..ကိုကြီးခေါင်းကိုကိုင်ပြီး…စောက်ပတ်နဲ့သူမျက်နှာအပ်ပေးလိုက်တယ်…..ကိုကြီးကျမစောက်ပတ်လေးကိုဖြဲရင်း….အစေ့လေးကိုယက်လိုက်….အကွဲကြောင်း လေးကိုအောက်ခြေကနေအထက်ထိယက်လိုက်…..အစေ့လေးစုပ်ပေးလိုက်နဲ့….နည်းမျိုးစုံအောင်သုံးပီးယက်ပေးနေပါတော့တယ်….
“အား…အင်း…ကိုကြီး…အားရှီး….အင်း…” ပလပ်….ပလပ် “ရှီး…အား…အင်း…ကိုကြီးရာ…အား….” “အင်း…အ….အ..အင်း….မရ…အ…မရရှီးး….မရတော့ဘူး” “အားးးး…..မရတော့ဘူးကိုကြီး…အ…ဖြူမနေနိုင်တော့ဘူး…”ကျမတကယ်မရတော့ဘူး….ကိုကြီးကိုအောက်စလွှတ်ပြကထဲက….အရမ်းဖီးတက်နေပီလေ.. အခုလိုစောက်ပတ်အယက်ခံလိုက်ရတော့…..အမြင့်ဆုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပီပေါ့…. “ဘာမရတာလဲချာတိတ်….ပလပ်”ကိုကြီးက မေးလဲမေး…စောက်ပတ်ကိုလဲသူ့လျှာအပြားလိုက်ကြီးနဲ့ယက်တင်လိုက်တော့….ကျမလဲ….. “အား….အလိုးခံချင်ပီ…..ကိုကြီးလိုးပေးတော့…ဖြူစောက်ပတ်ကိုလိုးပေးပါတော့…အား”ကျမပြောလဲပြော…..သူခေါင်းကိုလဲတွန်းလွတ်ကာ…ကျမနောက်ကို ဆုတ်ပလိုက်တယ်….ဟုတ်တယ်ကျမ…မရတော့ဘူး…..အရမ်းခံချင်နေပီလေ…..။ကိုကြီးကထိုင်ရာကနေထပီး…ကျမ မျက်နှာလေးကို…မေးကနေကိုင်မော့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုမျှင်းပီးစုပ်လိုက်တယ်…ပီးတော့မ “မရမ်းခံချင်နေပီလားချာတိတ်…” “အား….ခံချင်တယ်ကွာ…ကိုကြီးရာ…အရမ်းအလိုးခံချင်တယ်…” “အာဆို….အခန်းထဲကိုသွား….ကုတင်ပေါ်မှာဂါဝန်လေးလှန်ပီး…ဖင်ကုန်းနေဟုတ်ပလား” “ဟုတ်….ကုန်းပေးမယ်…ကိုကြီး”ကျမသွားဖို့အလုပ်မှာ….လက်ကိုဆွဲထားတော့….ကျမသိတယ်လေ…ကိုကြီးရဲ့အကျင့်ကို….. “ကိုကြီးလိုးတာခံဖို့….ဖြူအခန်းထဲကိုသွားမလိုနော်ကိုကြီး….ဖြူကိုလာလိုးပေးနော်…ဖြူဖင်ကုန်းပီးကိုကြီးလာလိုးတာစောင့်နေမယ်”လိုးပြောလိုက်တာပေါ့……
အဲတော့မှကိုကြီးကဆွဲထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်ရင်း…..ကျမကိုရီဝေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်…ကျမလဲခပ်သွက်သွက်လေးအခန်းထဲကိုဝင်လိုက် ပီး…ကုတင်ပေါ်တက်….ဂါဝန်လေးလှန်ဖင်လေးကုန်းရင်း…..ကိုကြီးဝင်လာပီးလိုးမဲ့အချိန်ကို….ရင်ခုန်စွာစောင့်နေတာပေါ့….ခဏနေတော့…ကိုကြီးအခန်း ထဲဝင်လာတာသိလိုက်ပီး…..ကျမဖင်တွေကိုနောက်ကနေ…ပွတ်သပ်ရင်းဖင်ပေါက်လေးကိုလဲ……လက်နဲ့ဝလုံးဝိုင်းသလိုလုပ်ပေးနေတယ်….ကျမဖင်ကြီး ဟိုရမ်းဒီရမ်းနဲ့…..ညီးညူရင်း…..ငန့်လင့်စွာစောင့်စားနေတာပေါ့….။ ကိုကြီးကျမဖင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပွတ်သပ်ပြီး…..ဖင်ကြားထဲကနေ…နောက်ကိုပြူးထွက်နေတဲ့ကျမစောက်ပတ်ဝလေးကို….သူ့လီးဒစ်ကြီးတော့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လီးကြီးရဲ့အနွေးဓါတ်ဟာ…..စောက်ပတ်ဝကနေတစ်ကိုယ်လုံးကို…လွှမ်းခြုံသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်……. ဗြစ်….ဗြစ်…. “အ….အင်းးးးးးး….အား….၀င်တယ်…ကိုကြီးရာ…အင်း”ကျမ၀င်လာတဲ့ကိုကြီးလီးရဲအရသာကို….ခံစားရင်းပါးစပ်ကလဲ…အော်ဟစ်နေမိတယ်…..။ ကိုကြီးက…ကျမဖင်သားကြီးတွေကိုဖြဲရင်း…လီးကြီးကို….အသွင်းအထုတ်မှန်မှန်လုပ်ရင်း…..စလိုးနေပါပီ….ကျမလဲ…..သူလိုးချက်တွေကပေးတဲ့…….. အရသာကိုခံစားရင်း…..အသံမျိုးစုံထွက်ကာ….ညီညူနေတာပေါ့…. “အား…အင်း…အား…” “……ရွှတ်…..ပြွတ်……ဖွတ်……ဖတ်…..” “…….ဖွတ်….ပြွတ်……ပလွတ်…..ဖွတ်….”ကိုကြီးလီးကြီးကို……တဖြည်းဖြည်းချင်း တထစ်ချင်းထည့်လာလိုက်တာနောက်ဆုံး….ကျမစောက်ပတ်လေးထဲကို အဆုံးကိုရောက် လာပါတော့တယ်။…ကိုကြီးလီးကကြီးမားတုတ်ခိုင်ရှည်လျှားတော့…အရမ်းအရသာရှိပြီး…ခံရတာအပြည့်အသိပ်နဲ့အရမ်းကောင်းတယ်… “ အို….ကောင်းလိုက်တာ…..ဆောင့်ပါ….တအားဆောင့်ပေးစမ်းပါ……..ဆောင့် ဆောင့်…အင်း…….အီး………”လိုကျမညီးညူရင်း…တောင်းခံနေမီတာပေါ့
“ ဖွတ်…ဖတ်..ဖတ်…ဖုတ်…ဖွတ်…ဖတ်…ဖတ်…ဖွတ်…အင့် ဟင့် ဟင့်….” “ အားပါးပါး…ရှီး…” “ကောင်းလားဖြူလေး…ချာတိတ်…အား..အင့်အင့်”ကိုကြီးကအားရပါးရင်စောင့်လိုးရင်း….ကျမကိုလှမ်းမေးလာတယ် “အား…ကောင်းတယ်….ထိတယ်ကိုကြီး…လိုးကွား….လိုးပါဖြူကို….အား”ကျမကိုလိုးနေတာမှန်းသိပေမယ်….ထပ်ထပ်တောင်းခံမိလောက်အောင်ကောင်း နေတော့…ကျမနှုတ်ကနေ….တတွတ်တွတ်ရေရွတ်ရင်း…ပြောနေမိတာပေါ့…. “ ဘွပ်….ဘွပ်….ပလွတ်….” “ ဘု…ဗြစ်….” “ အား….ကျွတ်ကျွတ်..ကျွတ်..” “ ဘု…ဗျစ်…ဗျစ်….”အား…ကျမအရမ်းကောင်းနေပီ…..ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာတောင်ပြောမပြတတ်အောင်ပါဘူး….. “ တစောင်းကွေးပြီး လိုးကြရအောင်…နော်ချာတိတ်”ကိုကြီးကကျမကို…..ဖင်ကုန်းလိုးနေရင်းကနေပြောလာတော့…..ကျမလဲ…အင်းလိုတုန့်ပြန်ရင်း……. ကိုကြီးလီးအချွတ်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်….ကိုကြီးကဖင်သားတွေကိုပွတ်နေရင်းကနေဖြေးဖြေးချင်း…လီးကြီးကိုစောက်ပတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်တယ်….။ ကျမတစောင်းလေးကုတင်ပေါ်အိပ်လိုက်တာပေါ့……။
“ဂါဝန်ချွတ်လိုက်တော့လေချာတိတ်…အကုန်ချွတ်လိုးချင်တာ…..”ကိုကြီးကတောင်းဆိုလာတော့…ကျမလဲဂါဝန်ကိုချွတ်…ဘရာကိုချိတ်ဖြုတ်ချွတ်ပီး…. ကိုယ်တုံးလုံးလေး…တစောင်းအိပ်လိုက်တယ်……ကိုကြီးက…ကျမနောက်ကနေ…..ကပ်ပီး…ခပ်ကွေးကွေးလေးအိပ်လာတယ်…စတီးဇွန်း(၂)ချောင်း ထပ်ထားသလိုပေါ့………ပီးတော့…ကျမဖင်သားအပေါ်ချမ်းကိုလက်နဲ့ဆွဲဖြဲရင်း….သူလီးကြီးကိုကျမစောက်ပတ်ထဲသွင်းလိုက်တယ်………..။ ကျမဖင်ကိုနောက်ကော့ပေးရင်း….၀င်လာတဲ့လီး…အ၀င်ဖြောင့်အောင်အလိုက်သင့်လေးနေပေးလိုက်တာပေါ့……….။
လီးကြီးဝင်လာလိုက်တာ ကျမဖင်ကြားထဲကိုကြီးဆီခုန်ထိသွားမရပ်သွားတယ်…..။ကျမနောက်ကနေ…..ကိုကြီးနို့တွေကိုဆွဲရင်း….လိုးစောင့်ပါတော့တယ်….စောင့်ချက်ကလဲ ပြင်းထန်သလို…..ကျမလဲဖင်ကိုနောက်ပြန်ကော့ရင်း…အလိုးခံနေမီတယ်…..ကိုကြီးလီးကြီးရဲထိရောက်မှုက….တစောင်းလိုးတဲ့အခါပိုသိသာတယ်… ကျမဖင်သားတွေနဲ့ကော…ပေါင်တွေပါညှပ်ထားတော့……စောက်ပတ်ထဲကိုလီးဝင်ထွက်တိုင်း…ပွတ်တိုက်မှုအားကပိုသိသာတယ်……။ “ ဗျစ်….ဘု ဘု…ဘွပ်..” “ အား…ကျွတ်ကျွတ်….ဟင့်…” “ချာတိတ်…ပီးမယ်….အား…နော်…အ….အ..” “အင်း…ပီးလိုက်တော့…အား….ကိုကြီးလရေတွေ…လိုးပီးဖြူစောက်ပတ်ထဲပန်းထည့်ပေးပါ…အား…”ကျမအော်ဟစ်နေတုန်းမှာပဲ………..။ “အင်း..အား…ရော့ချာတိတ်…ကိုကြီးလရေတွေယူ…အင့်…အား…အင့်” “အား…အ…အား…ကိုကြီးအားးးး” ကိုကြီးလရေတွေဟာ…အရှိန်အဟုန်နဲ့ကျမစောက်ပတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်တာ…နွေးကနဲ့ဖြစ်သွားရင်း…..ကျမလဲဟိုးအမြင့်ကြီးကပြုကျလာသလို… ရင်ထဲအေးကနဲ့ဖြစ်ကာ….အဆုံးအစွန်ဆုံးပီးမြောက်သွားပါတော့တယ်….ရှင်….။ ပြီးပါပြီ